Radio Don Bosco - Ho halan’ny olona rehetra ianareo...
Ho halan’ny olona rehetra ianareo...
Naseho ny : 25 novambra 2020
Alarobia 25 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 12-19 — Mahareta ambara-pahafaty, hoy ny Tompo, dia homeko anao ny satro-boninahitry ny fiainana.
Ampafantarin’i Jesoa mialoha ny fanenjehana sy ny fijaliana hihatra amin’ireo mpianany : fisamborana, fanaovana an-tranomaizina, famonoana, fankahalana, hany ka izay manjo Azy dia hanjo azy ireo koa. Ny fampijaliana ahatra amin’ny vatan’izy ireo no ahatsapany fa miombona tanteraka amin’i Jesoa izy ireo ary tsy ara-batana ihany fa ara-tsaina koa, eo ny tebiteby, eo ny tahotra. Toa endrika faharesena izany, saingy lalana tsy maintsy izorana makany amin’ny fijoroana ho vaolombelona, ahafahafana mijoro amin’ny marina ; ahafahana mametraka ny Fanjakan’Andriamanitra ao amin’ny fiainan’ny olona, ahafahana manome hasambarana ny olona. Tsy maintsy mijaly mba hahasambatra ny hafa. Tsapa amin’ity Evanjely nohenointsika ity fa tsy mora ny manara-dia an’i Jesoa fa hiaretana fijaliana sy fahoriana, saingy mihafara amin’ny fahombiazana sy fandresena, satria miaraka amin’i Jesoa, Ilay nandresy an’izao tontolo izao. Tsy miady irery akory ireo mpianany fa eo mandrakariva Izy araka ny teniny manao hoe : “Indro ho eo aminareao mandrakariva Aho mandrapatapitr’izao tontolo izao”.
Koa eo am-piatrehana ny fiaianana andavanandro dia indro i Jesoa eo amintsika, amin’ny alalan’ny Fanahiny Masina, amin’ny alalan’ny Sakramenta isan-karazany iaianantsika amin’ny mahakristiana antsika, indrindra moa ny Sakaramentan’ny Eôkaristia. Misy ny ady atrehintsika isan’andro toy ny fiarovana ny finoana izay aina mamelona antsika sy hery entintsika miasa eo amin’ny fiainana. Izany ady atrehintsika isan’andro izany no mitarika antsika mankany amin’ny fandresena farany miaraka amin’i Jesoa, dia ny fitsanganan-ko velona. Araka ny nolazain’i Jesoa amin’ny mpianany fa Izy no hanome ny teny sy ny fahendrena ho azy ireo eo anatrehan’ny fitsarana azy ireo, amin’ny fiampangana azy ; olona tsy manam-pahaizana ireo mpianatr’i Jesoa ireo, olona tsotra, fa antoka ho azy ireo ny Fanahy Masina izay manome ny fahiratan-tsaina, ny teny ho lazaina, ny fahendrena. Toraka izany koa isika eo am-piatrehana ny fiainana andavan’andro, eo amin’ny fiarovana sy ny fijoroana amin’ny finoantsika. Amen !